आकाश भन्छन् – खुलाम’ञ्चको भात नभए म मरि’हाल्छु ! – yuwa Awaj
आकाश भन्छन् – खुलाम’ञ्चको भात नभए म मरि’हाल्छु !
काठमाडौ : घरको कान्छो छोरो। २३ वर्ष भइसक्दा न पढ्न सके न केही इलमको बाटो समाउन। जिन्द’गीले खोजेजस्तो बाटो भेट्टाउन नसकेपछि आकाश ति’वारी पाल्पाबाट काठमाडौं हानिए।
आकाश काठमाडौं सहरमा कमाउने स’पना बोकेर आएका थिए। त्यो बेला काठमाडौंको आकाशमा भने कोरो’नाको कु’इरो पस्दै थियो। तर उनलाई यसबारे र’त्तिभर भे’उ भएन। रोजी’रोटीका लागि सं’घर्ष गर्न आएका उनी काम खोज्न लागि परे शिव’रात्री भन्दा केही दिनअघि मात्र काठमाडौं आएँ।
होटल तथा फ्रे’स हाउसमा काम गर्न जानेको थिएँ । उनी अलमल पर्दै सुनाउँछन्, ‘काम गरेर खान सकिहाल्छु नि भन्ने आत्म’विश्वास थियो। तर, नसोचेको वि’जोग बे”होर्नुपर्यो
आकाशको यो अनिश्चित उडान भइदियो। बाटोमा को’रोना ठो’क्किन आइपुग्छ र तिर्मि’राउनुपर्छ भनेर सोचेका पनि त थिएनन्।
उनले काम त पाएनन् नै। बस्ने-खाने समेत टुं’गो भएन। अलिकति कमाउँला र सुख होला भन्ठा’नेका उनको जीवनमा को’रोना नचि’ताएको ब’ज्रपात भयो। यसबाट कसरी पार पाइन्छ उनले अनुमान गर्न सकेका छैनन्। को’रोना पहिलेका दिन फर्केला नि त भनेर झिनो आशाको त्या’न्द्रो बोकेर काठमाडौंका चिसा गल्ली’मा भौंता’रिइरहेका छन्।
अहिले उनको भाग्य र दैनिकी दुवैमा को’रोनाको तुवाँ’लो लागिरहेको छ। कहिले फाट्ने? कहिले ‘छ्याङ्ग उ”घ्रने? अनि’श्चित छ। लकडा’उन त खुलेको छ, तर कसले काम दिन्छ। हरेक ठाउँमा हात जोडेर काम मागेँ। जस्तो काम पनि गर्छु भनेर प्रयास गरेँ। तर कसैले दिएन,’ काठमाडौंले दिएको दुःख सुनाउँछन् उनी, ‘स’डकमा तड्पि’एर हिँडेको छु। पैसा छैन। सड|कमै खा’एको छु, सड’कमै सुतेको छु।’
सडकमा पुग्नु भनेको एक हिसाबले सुरक्षित हुनु हो, पाउने वा गुमाउने भय हुँदैन। तर आकाशलाई काठमाडौंको सडक सुरक्षित लाग्दैन। चो’रीको डरले उनी रा’तभर जा’गा बस्छन्। उज्यालो दिनको प्रतीक्षामै रात का’ट्छन्।
स’डकमा बस्न पनि सजिलो रहेनछ। पु’लिसले पनि बिना काममा भा’टा हान्छ। मुख छा’डेर बोल्छ। न’राम्रो भन्छ। लु’ट्ने र कु’ट्ने उस्तै हुन्छ,’ उनी दुःख बिसाउँछन्, ‘अस्ति भ’र्खर मोबाइल चोरी भयो। अर्काले दिएको थो’त्रा लुगा पनि चो’रिएला कि ड’र लाग्छ।’
उनी अगाडि सुनाउँछन्, ‘रातमा नसुतेको धेरै भइसक्यो। दिउँसोमा भद्र’काली कि प्र’हरी चौ’की छेउतिर सुत्छु। उज्यालोमा थोरै सुरक्षित लाग्छ।’आफूले राम्रै बोल्दा पनि पाइला पाइ¥लामा अप’मानित हुनुपर्दा निकै सक’स हुन्छ उनलाई।
काठमाडौं बिरानो भएर भोको पेट रूम’लिरहँदा धन्न खुलामञ्चले उनलाई भरो’सा दियो। यहाँ मनका’रीहरूले बाँडेको खाना खाएर उनी धा’निएका छन्। तर यो भि’डमा पनि उनी आफूलाई एक्लो पाउँछन्। एक त उनी काठमाडौंकै लागि नयाँ, अर्को कोही आफ्ना-चिने’जानेका पनि छैनन्। काम नपाएपछि रत्न’पार्क छाडेर यताउता जान पनि सक्दैनन्। यहीँ बसे भात खान पाइने सम्झेर पाइला अघि बढ्दैनन्।
यहाँ समय–समयमा खाना आउँछ। भात र पानी खान पाउँछु। यो सम्झेर अलि पर पुग्न पनि सक्दिनँ। के थाहा अन्त झन् भोकै हुनु पर्ने हो कि!,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अर्काको सहरमा गाह्रो हुने रहेछ। त्यसमाथि म गाउँबाट आएको एक्लो केटो। लु’टेराको ग्या’ङ आएर कु’ट्दा पनि प्र’हरीको समेत साथ पाउँदिनँ। म घरको न घा’टको भएँ।’
साथमा भएको मोबाइल चो’री भएपछि घरमा आफन्तसँग सम्पर्क गर्न पाएका छैनन् उनले। हिँडेर घर पुग्ने हिम्म’त पनि छैन। बसमा जान पैसा छैन। अझ भनौं हारेको सिपाही झैं भएर गाउँ फर्कन आफ्नै इखले दिँदैन।
यसपालि दसैंमा पैसा कमाएर मात्रै गाउँ फर्कने सोचेर काठमाडौं हान्नि’एका थिए उनी। काठमाडौंको का’रुणिक यथा’र्थले रुँदै हिँड्ने पारिदिएको छ। पैसा कमाएर दसैं मनाउन घर जाने भनेको, सडकको बास भयो। म कति तड्पि’एर हिँडेको छु, मलाई नै थाहा छ,’ उनी गुना’सो गर्छन्, ‘कसैले कसैलाई सम्मान गर्दैन। सिधै तँ भन्छन्। खा’ते भन्छन्। मैले राम्रो बोले पनि कसैले राम्रो मुखले जवाफ दिँदैन।’
आफूले सम्मान दिएका बटुवाले त’थानाम गा’ली गर्दा मन भक्का’निन्छ उनको। तर कमजोर भएर क’ठोर सडकमा बाँच्न सकिन्न भन्ने उनले बुझ्न थालेका छन्। सडकका मान्छे चिनेपछि उनले आफ्नो रङ बदल्न थालेका छन्। मीठो बोल्नेलाई एक घु’ट्को पानी दिन्छन्। समय बताइदिन्छन्। बोल्न मन लागेन भने बोल्न नसक्नेको अभिनय गरिदिन्छन्।
सड’कमा पहिलेदेखि बसेकाहरूले सड’कलाई आफ्नै सा’म्राज्य ठान्दा र निमु’खालाई द’पेट्दा उनको मन अमिलिन्छ। त्यसबखत प्रहरीसँग पनि साथ नमागेका होइनन्। प्रह’रीहरू पनि टोले गु’ण्डाका अघिल्ला’तिर हात ‘बाँधेर बसेको उनी स्वयं साक्षी हुन्।
काठमाडौंका मान्छे चिनिसकेपछि मलाई कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन। बोल्न पर्छ भनेर म बोल्न नसक्ने जस्तो अ’भिनय गरिदिन्छु। बोल्यो भने टोलेहरूले कुट्छन्। पुलि’सलाई भन्दा उल्टै मलाई पा’गल बनाइदिन्छन्। तीन पल्ट पुलिससँग सहयोग मागेँ, रो’एर फर्किनु पर्यो,’ उनी सुनाउँछन्। काठमाडौंको सास्तीले खि’रिलो तुल्याएका उनी कसैले मीठो वचन बोली पो हाल्छ कि भनेर जुठो मुख नगरेको पानी बोकेर हिँड्दा रहेछन्।तर यो चो’खो पानी खुवा’उने अवसर उनले पाएका छैनन्।
कसैले दाइ–भाइ पानी दिनु खाम् भन्ने-मान्ने कोही भेटिएको छैन। ओइ पानी दे खा’ते भन्छन्। मलाई चि’त्त बुझ्दैन। चो’खो पानी पनि जु’ठो भन्दिन्छु,’ उनी य’थार्थ सुनाउँछन्, ‘त्यसैले म लाटो भएको अभि’नय गरिदिन्छु। आफैं जोगिएर हिँड्छु।’ को’रोनाको भू’मरीबीच पनि उनले काम खोज्दै नहिँडेका होइनन्। काम पाएनन्।
बरु केहीले लु’गाफाटा, जुत्ता दिएर पठाए। अहिले ठन्डीमा काम लागेको छ। यो लक’डाउन उनलाई जीवनकै पाठशाला बनेको छ। यसको ज्ञान कतै बिक्री त हुँदैन, दुःखमा बाँँच्न धेरै काम लाग्छ भन्छन् उनी। भन्छन् ‘यहाँ वरपर थुप्रै शौबचालय छन्। तर हामी खोला’किनार र घारी खोज्दै जानुपर्छ।
हात’मुख धुन पानी भएको ट्यांकी खोज्दै हिँड्नु’पर्छ।’यी सबै त उनले झेलेकै थिए। खुलाम’ञ्चमा अब खाना ब’न्द हुने कुराले उनलाई सबभन्दा धेरै पिरोलेको छ। यहाँ खाना बन्द भयो भने अवस्था कस्तो हुन्छ उनी कल्पना गर्न सक्दैनन्। अहिले बोल्दै त छु, खुलाम’ञ्चमा भात नभए मरि’हाल्छु होला नि,’ यति मात्रै भन्न सक्छन् उनी।
Prevभारतबाट आलु आयत नभएपछि नेपालको आलुले राम्रो मूल्य पायो…हेर्नुहोस् ।
Next“केपी ओली” : ‘राजीनामा दिन्नँ, हल्लाको पछि नलाग्नू’… हेर्नुहोस्।
थपियो निषेधाज्ञा अवधी ,अब यी क्षेत्रहरु कडाइका साथ बन्द हुने,पूरा पढ्नुहोस
प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता नभए सहकार्य हुन गाह्रो छ – गोकुल बास्कोटा !
को हुन् अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति बनेका ‘जो बाइडेन’ ?